जापानका ३ ‘अ’ : अटोमेसन, अथक परिश्रम र आरिगातो गोजाईमास !
हिरोसिमा (जापान) - बच्चैदेखि किताबमा पढ्दै अनि अग्रजबाट सुन्दै आएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र जापान पुग्ने सपना जापान सरकारको जाईका अन्तर्गतको जेडीएस छात्रवृत्तिमा २ वर्षे अध्ययनका लागि छनौट भएसँगै पूरा भयो ।
भविष्यमा आफ्नो वृत्तिविकासमा छात्रवृत्तिले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई लिएर निकै हर्षित थिएँ । त्योभन्दा ज्यादा उत्साहित अर्काे पक्षबाट थिए, सधै जिकिर भइराख्ने जापानको आर्थिक समृद्धि, अत्याधुनिक प्रविधिबारे केहीदिनमै नजिकबाट नियाल्ने जीवनको पहिलो अवसर प्राप्त गर्दै थिए ।
२०१९ अगस्टको अन्तिम साताको उडानबाट मातृभूमि नेपाल छोडेर सूर्याेदयको देश जापान टेकेदेखि हालसम्मको छोटो समयमा जापानमा मलाई अचम्मित साथै आकर्षित गर्ने थुप्रै कुरा देखिए तर ३ वटा यस्ता अद्भूत कुरा देखे, जसले पूरा जापानलाई परिभाषित गर्ने सामर्थ्य राख्दछ ।
जापानलाई ३ ‘अ’ मा समेटेर परिषाषित गर्न सकिन्छ । जुन यसप्रकार छन् –
पहिलो – अटोमेसन
अटोमेसन अर्थात् स्वचालन जापानको विकास र समृद्धिको पर्याय प्रतित हुन्छ । जापानमा ठूल्ठूला औद्योगिक क्रियाकलापदेखि स–साना दैनिक दिनचर्याका कार्य पनि स्वचालित प्रविधिमा आधारित छन् ।
निश्चय नै अटोमेसनले जापानको समृद्धिलाई गति दिएको प्रतित हुन्छ । चाहे ट्राफिक सिग्नल हुन्, रेल तथा बस वा अन्य भुक्तानीका कुराहरू स्वचालित प्रविधिमा छन् । यति मात्रै नभई यहाँका शौचालय पनि उच्च स्वचालित प्रविधिमा टेकेर बनाइएका छन् ।
अर्काे जापानको गज्जबको कुरा भनेको भेन्डिङ मशिन हो । जसको प्रयोगबाट विना पसले सहजै सडकको छेवैबाट अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न सकिन्छ ।
जापानको हालको जनसंख्या करीब १३ करोड रहेको छ । जापानमा ५० लाखजति भेन्डिङ मशिन रहेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ अर्थात् हरेक २६ जनाको लागि १ भेन्डिङ मशिन ।
दोस्रो – अथक परिश्रम
‘वर्क इज वर्शीप’ अर्थात् कामलाई पूजा मान्ने संस्कारको जापानमा निकै अनुशासित ढंगले प्रत्येक नागरिकले व्यावहारिक कार्यान्वयन गरेको महसूस सहजै गर्न सकिन्छ । काम गर्दा जापानीहरू समयलाई निकै ध्यान दिँदा रहेछन् ।
एउटा किस्सा जो मसँग घटेको थियो समयलाई लिएर । टोकियोको सिंजुकु वासिङ्गटन होटेलको बसाइको दौरान हामीहरूलाई जाईकाले जापानमा घुलमिल हुन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले जापानी भाषाको मोड्युलहरू पनि सञ्चालन गरेको थियो । पहिलो कक्षामा जाँदा म लिफ्टमा मानिसहरूको चापले गर्दा १ मिनेट ढिलो पुगेको थिए । कक्षा प्रवेशपश्चात् जापानी भाषा प्रशिक्षकले ‘बोहरा सान ! यु आर वान मिनेट लेट’ भनेको अझै याद आउँछ ।
समयका अतिरिक्त जापानीको कामप्रतिको लगाव पनि निकै अनुकरणीय रहेको छ । सुन्दा अचम्म राख्छ – जापानमा कर्मचारीले तोकिएभन्दा घण्टौं ज्यादा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसले गर्दा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवनमा असर पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी धेरै कार्यालयमा निगरानीको लागि रोबोट वा ड्रोन राखिँदा रहेछन् । यदि कुनै कर्मचारी लगातार धेरै दिनसम्म अतिरिक्त काम गरेको फेला पर्छ भने स्पष्टीकरण सोधिनुका साथै त्यस्तो नगर्न प्रबन्धकबाट निर्देशितसम्म गरिँदो रहेछ ।
तेस्रो – आरिगातो गोजाईमास
आरिगातो गोजाईमास अर्थात् नम्र जापानी संस्कार । अर्थतन्त्रको हिसाबले विश्वको तेस्रो शक्ति जापान संस्कार एवं विनम्रतामा भने निर्विवादित रुपमा नम्बर १ स्थान दावीको हकदार रहन्छ । जापानी जति विनम्र अनि सदाचारी मानिस दुनियाँमा बिरलै भेटिन्छन् होला जस्तो लाग्दछ जापानीको व्यवहार, बोली, सहयोगी भावना देख्दा ।
उपशीर्षकमा रहेको ‘आरिगातो गोजाईमास’को अर्थ के हो भन्ने कतिपयलाई कौतुहलता जाग्न सक्छ । जापानीमा ‘धन्यवाद’लाई ‘आरिगातो गोजाईमास’ भनिन्छ । यो हुन त केवल एक शब्द हो तर नम्र जापानी दिनमा यसको कति हजार पटक प्रयोग गर्दछन्, त्यो बडा सुन्दर पक्ष रहेको छ ।
एउटा विदेशी सहयोग माग्न जापानी कहाँ पुग्छ, जापानीले पूरा सहयोग गर्छ साथै अन्त्यमा मुस्कानसहित ‘आरिगातो गाजाईमास’को भेट पनि टक्र्याउँदछ । यो हो जापानी संस्कार ।
विनम्रसँगै जापानीहरू निकै इमान्दार पनि हुँदा रहेछन् । १ दिन टोकियो बसाइका दौरान १ जना पाकिस्तानी साथीको मोबाइल फोन होटेलको लबिमा छुटेको थियो । ती साथीले त्यो कुरा भोलि मात्र थाहा पाएका थिए र रिसेप्सनमा बुझ्न जाँदा हिजो १ जना जापानीले फेला पारेको र रिसेप्सनमा बुझाइदिएको कुरा थाहा भएको थियो ।
त्यो दिन मलाई लाग्यो सायद समृद्ध र शक्तिशाली देश ठूल्ठूला भवन र महलले नभई त्यो देशका नागरिकको इमान्दारिताले बन्ने गर्छन् ।
(शाखा अधिकृत बोहरा हाल हाल जापानको हिरोसिमा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् ।)